Ukukhwabanisa kwe-intanethi nokuphepha ku-intanethi - Amathiphu Amandla Kusuka ku-Semalt Kubo Bonke Abasebenzisa Inthanethi
Uma usebenzisa njalo i-Inthanethi, futhi ngokuqondile nama-imeyli, kufanele uqaphelekwezingxoxo ze-imeyili nokukhwabanisa kwe-intanethi.
Ukukhwabanisa kwe-Intanethi uhlobo lokukhwabanisa oluvela emafomu ahlukahlukene. It ibanga kusukaukukhwabanisa kwe-intanethi ukuthumela izinsongo ze-imeyili; Ngeshwa, ayikho imithetho ebekiwe kanye nemigomo yokuvimbela ukukhwabanisa kwe-inthanethi nokukhwabanisa kwe-intanethi. Abakhohlisiyeka lutho ukuze uthole imininingwane yakho ebucayi kanye nemininingwane yekhadi lesikweletu. Zihlakaniphile, kodwa lokho akusho ukuthi awukwazi ukukhomba amasela.Kungenzeka njalo ukuba uzilahle futhi ugcine ulwazi lwakho luphephile, ikakhulukazi uma ukhumbuza amathiphu alandelayo anikeziweU-Alexander Peresunko, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Izinsizakalo ze-Digital.
Funa amabhizinisi asungulwe noma abathengisi
Ngenkathi isebenzisana nezinkampani zendawo, kubalulekile ukufuna abathengisi abasungulwenoma amabhizinisi. Ngenxa yalokhu, ungaqasha ummeli omuhle webhizinisi noma i-akhawuntiant ukukusiza ngemaphepha. Qinisekisa ukuthi uyazi konkemayelana nendawo, inombolo yocingo, ne-ID ye-imeyili yomdayisi. Ngenxa yalokhu, ungacela imibuzo embalwa ngaphambi kokuqeda isivumelwano. Kungase kuzwakalenjengoba ucele okuningi ngaphambi kokuba wamukele ukunikezwa kwabo, kodwa akukaze kube sekwephuzile ngoba ufuna ukuhlala uphephile ku-intanethi..Kufanele futhiqiniseka ukuthi uthengisa izinto ezishicilelwe, hhayi imikhiqizo yendawo. Uma umthengisi ekunika ukuba ube nemikhiqizo yangakini engenesiqinisekiso,lokhu kungaba uphawu oluphazamisayo.
Ngisho nemisindo yezincwadi ezibhaliwe mayelana nokukhwabanisa kwe-inthanethi, abesimabhizinisi ngokuvamileuhluleka ukuthola abadayisi abafanele. Yingakho kufanele ucwaninge kumdayisi ngaphambi kokuqeda isivumelwano. Iningi labantu alikhathaziukuqhuba ucwaningo oluningi njengoba bezwa ukuthi sekuyisikhathi sokuchitha. Ake ngikutshele ukuthi kuyadingeka ukuthi uhlale uphephile ku-intanethi. Uma ukhonaukubhekana nabathengisi abathile abasha, kufanele ucele ulwazi lwabo lomuntu siqu, ikhadi le-ID, nekheli eliphelele ngaphambi kokucubungula izimali. Uma ubanqume ukuthenga okuthile kumdayisi othile, kubalulekile ukwazi into, intengo yayo, nomkhiqizo. Abanye abahlaseli bazama ukukwenzaukuthengisa imikhiqizo ephansi noma ephelelwe yisikhathi; qinisekisa ukuthi into oyithengayo isesimweni esihle, futhi intengo yayo akufanele ibe ngaphezulu kunezimaketheisilinganiso.
Qaphela ama-imeyili angacelwa
Isikhathi esithile manje, abantu bakhononda ngama-imeyili angacelwe. Kumeleungangeni kulowo ma-imeyili njengoba angase akhombe imininingwane yakho kanye nemininingwane yekhadi lesikweletu. Abaqaphi bazama ukugibela abantu nge-imeyiliokunamathiselwe kanye nezinto ezifanayo; kubalulekile ukuthi ungalandi lutho oluvela ku-ID engaziwa ye-imeyili. Lapho uhlela inthanethi,kufanele usebenzise inombolo yakho yekhadi lesikweletu kuphela uma uhlolile kahle iwebhusayithi. Kubalulekile ukuthi ungafaki ikhadi lakho lesikweletuimininingwane noma i-ID ye-PayPal kuwebhusayithi ongaqiniseki ngayo.
Ungalokothi ufake imali yakho
Yebo, akumelwe neze uthathe imali yakho njengengozi. Iningi lezigebengufuna izinkokhelo ngokusebenzisa ukudluliselwa kwebhange ngokuqondile, futhi uma ubona noma yikuphi kubo, kumele uthintane nommeli wakho Source .